घटना घटेको २४ घण्टा नहुँदै सानेपाको घट्नाको तथ्य बल्ल बाहिर आयो ! – Etajakhabar
माघ २८-पूर्वसचिव अर्जुन कार्कीका घरेलु कामदारले उनकी पत्नी मुना कार्कीको ‘ह”त्या गरी देहत्याग’ गरेका छन् । ललितपुर उपमहानगरपालिका–२, सानेपास्थित घरमा आइतबार बिहान कामदार विजय चौधरीले कार्कीको घाँ” टीमा डो”’ रीले क”सेर र टाउकामा पि’र्काले हा”’नेर ह”’ त्या गरी आफुले देखात्याग गरेको प्रहरीको दाबी छ । प्रहरीका अनुसार घटनास्थल पुग्दा पूर्वसचिव कार्कीकी ४९ वर्षीया श्रीमती भान्साकोठामा र’ग’ता’म्य अवस्था अ”चेत फेला परेकी थिइन् ।
कामदार दाङ, लमहीका २२ वर्षीय चौधरी भने घाँ”’टीमा हरियो नाइलनको डो”री क”’सिएर मृ”’ त अवस्थामा फेला परेका थिए ।घटनाबारे सूचना पाएलगत्तै सानेपा वृत्तबाट प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा एउटा टोली त्यहाँ पुगेको थियो । घटना हुँदा पूर्वसचिव कार्की पशुपतिमा रुद्री पूजा लगाउन गएको महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरका प्रमुख एसएसपी टेकप्रसाद राईले जानकारी दिए ।
‘कार्कीजी फर्किएपछि बी’भ”त्स दृश्य देखेर चि”’च्याउँदै बाहिर निस्कनुभएछ । त्यसपछि उहाँले वा छिमेकीमध्ये कसैले प्रहरीलाई खबर गर्नुभएछ,’ उनले भने । प्रहरीले सानेपाकै स्टार अस्पतालबाट एम्बुलेन्स बोलाएर कार्कीलाई उपचारका लागि पठाएको थियो।महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरका डीएसपी सन्तोष तामाङका अनुसार चौधरी २०६६ सालदेखि कार्कीको घरमा बस्दै आएका थिए । उनैले मुनाको ह”त्यापछि देहत्याग गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको छ।
‘कार्कीलाई इमर्जेन्सीमा ल्याएलगत्तै डा. मन्जिता बज्राचार्यले उहाँको पल्सलगायत जाँच गर्नुभयो, सबै नील थियो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि उहाँहरूले रिभाइभ गर्न सकिन्छ कि भनेर सीपीआर (कार्डियाक पल्मनरी रिसेस्टेसन- बन्द भइसकेको मुटुलाई पुनः चलाउने प्रयास) गर्नुभयो। त्यो उहाँहरूले लगभग ४५ मिनेटसम्म कोसिस गर्नुभयो ।
त्यसपछि पनि रिभाइभ भएन ।’प्रहरीले अचेत अवस्थामा अस्पताल पठाएको भने पनि अस्पताल ल्याउँदा उनको निधन भइसकेको डा. रूपाखेतीले बताए । अस्पताल प्रशासनले सोही आधारमा ‘ब्रट डेड’ (अस्पताल ल्याउँदा निधन भइसकेको) भनेर ‘डेथ सर्टिफिकेट’ (निधनको प्रमाणपत्र) जारी गरेको छ।
‘पछि अस्पतालका न्युरो सर्जनले पनि आएर टाउकामा लागेको चो”ट हेर्नुभयो, उहाँको भनाइअनुसार कुनै धा”र नभएको वस्तुले टा”उकामा धेरैचोटि प्र”’हार गरेको जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने, ‘कार्कीको घाँ”’टीमा र हातमा डो”’रीले बाँ”’धेको नी”’लडाम र दायाँ आँखामुनि का”’टेको दाग छ।’आजको कान्तिपुरमा स्वरूप आचार्य, मातृका दाहालले लेखेको समाचार अनुसार भान्सामा पिर्काजस्तो प्लास्टिकको हरियो सानो टुल टु’क्रा”टु”’क्रा भएको अवस्थामा फेला परेको घट”नास्थलमा सुरुदेखि खटिएकी ललितपुर परिसरकी एसपी तथा प्रवक्ता दुर्गा सिंहले बताइन्।
सिसिक्यामेरा फुटेजमा प्रहरीले भेट्टायो यस्तो दृश्य
प्राप्त सिसिटिभी फुटेजका आधारमा सोमबार बिहान १० बजेर १० मिनेटमा चौधरीले मुनालाई किचेनमा काम गरिरहेका बेला पछाडिबाट डोरीले घाँ टी न्याँ केका थिए। त्यसपछि करिब १३ मिनेट चौधरीले के गरे भन्ने सिसिटिभी फुटेजमा देखिँदैन।
१० बजेर २३ मिनेटमा चौधरीले मुनाको टाउकोमा केही चिजले सातपटक हि””र्काएको पनि सिसिटिभी फुटेजमा देखिएको छ। त्यसपछि करिब ४५ मिनेटसम्म उनी घटनास्थलमै ओहोरदोहोर गरिरहेको देखिएको छ। सिसिटिभी फुटेजअनुसार ११ बजेर ८ मिनेटसम्म उनी किचेनमा ओहोरदोहोर गरिरहेको देखिएको छ।
११ बजेर २० मिनेटमा पूर्वसचिव कार्की घरमा आइपुग्दा चौधरी झु”न्डि”एको अवस्थामा देखिए भने मुना किचेनमा ल’डिर’हेकी थिइन्।
१० बजेर १० मिनेटमा मुनालाई घाँ”टीमा डो”रीले न्याँ”केर लडाउनुअघि पनि किचेनबाहिर चौधरी ओहोरदोहोर गरिरहेको सिसिटिभी फुटेजमा देखिएको छ।
१० बजेर १० मिनेटमा मुनालाई घाँ”’टीमा डो”’रीले न्याँ”केर ल’डा”’एपछिको १३ मिनेटसम्म चौधरीले के गरे भन्ने चाहिँ खुल्न सकेको छैन। चौधरीको ‘अन्डरवेयर’मा र”ग”त र वि”’र्य लत्पतिएको देखिएको छ। पूर्वसचिव पत्नी मुनाको मासिकश्रा”व चलिरहेको पनि प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको छ। प्रहरीले घटनाको थप अनुसन्धान गरिरहेको छ।
‘चौधरी परिवारकै प्रिय थियो’
म पशुपतिनाथको दर्शन गर्न बिहानै निस्किएको थिएँ । उनी (मुना कार्की) घरमै यताउता गर्न थालिन् । त्यसैले म मात्रै मन्दिर गएँ । तर, पशुपतिबाट फर्किंदासम्म यस्तो घटना भयो । म उता भगवान्को पूजा गर्न जाने, घरमा यस्तो नराम्रो घटना हुने ? यस्तरी मा”’र्दा कति पी””डा भयो होला ? कति चि”च्याइन् होला ? कति दुख्यो होला ? सुवास गोतामे/ नितु घलेले अन्नपूर्ण पोस्टमा यो समाचार लेखेका छन् ।
म घर आउँदा गेट बन्द थियो । बोलाएँ, बोलिनन् । गेट खोलेर भित्र छिरें । टेबलमा विजय (विजय चौधरी) प”छारि”एको थियो । भान्सामा छिरें । र’गत’मा ल’तप’ति”’एको देखें । मैले केही सोच्न सकिनँ । प्रहरीलाई सम्झें, फोन गरेर बोलाएँ । पापीलाई सानैदेखि पालेर राखेको थिएँ । यस्तो घटना भयो । यस्तो आ’पत्ति आइलाग्यो, कसरी सम्हालिन सक्छु ? मुनाको हात बाँ””धिएको थियो । घाँ”’टीमा डो’री’ले क’से””र मा”रे”ज”स्तो देखिन्छ । डाइनिङ हलमा भएको एउटा मेच भाँ”चि”एको र प्लास्टिकको पि”र्का टु’क्राटु”’क्रा भएको देखें । त्यति गर्दासम्म उनले किन प्रतिकार गर्न सकिनन् ? अचम्म लागिरहेको छ ।
चौधरी सात–आठ वर्षदेखि हाम्रो घरमा बस्दै आएको थियो । कसैसँग नराम्रो सम्बन्ध थिएन । बाबुलाई दिनको ८–१० पटक त म्वाइँ खान्थ्यो । खुब माया देखाउँथ्यो । यस्तो गर्ला भन्ने सोच नै आएन । मैले छोराछोरीलाई कसरी मुख देखाउने ? के भनेर चित्त बुझाउने ? अब एक्लै के गर्न सक्छु ? मेरी मुना मलाई छाडेर गयौ । अब कसरी बाँच्नु ?
Posted on: Tuesday, February 11, 2020 Time: 10:31:33
विपदकाे घडिमा बिरामी भर्ना नगर्ने अस्पतालहरूलाइ भाैतिक कारवाही गर्ने विप्लवकाे चेतावनी (बिज्ञप्ति सहित)
आज पश्चिमी वायु र स्थानीय वायुको प्रभावले हावाहुरीसहित वर्षा हुने
कोरोनाले चिन ग्रसित हुदै गर्दा, चीनलाई दोष दिने अमेरिका र युरोपमा अहिले सन्नाटा
युरोपमा कोरोनाभाइरसबाट ३० हजार बढीको निधन
चीनमा फेरी थप ३६ मा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण देखियो
विदेशबाट फर्किंदा कोरना भाइरस लागेकी बागलुङकी अंशुले भनिन्- ‘यस्तो बेला अरुको हौसला चाहिने रहेछ’
चन्द्र र सूर्य अङ्कित राष्ट्रिय झण्डा फहराउदैँ नेपाल एयरलाइन्स इतिहासमै पहिलो पटक अहिलेसम्मकै लामो गन्तव्यमा उडान गर्दै आज अष्टे«लिया उड्दै
कोरोनाभाइरस: कामदारको स्वदेश फर्कने अधिकार नखोस्न नेपाललाई अपिल
विदेशबाट आएकाको घरमा रातो राखिने !
-20203 second ago
विवादास्पद स्वास्थ्य उपकरण खरिद सम्झौता रद्द, पाँच करोड धरौटी जफत
-19674 second ago
-19296 second ago
-18350 second ago
-17541 second ago
-16751 second ago
-16087 second ago
-15144 second ago